Mifamory mba hiaro ny faritra voajanahary ao Meksika ireo Mponina · Global Voices teny Malagasy
Mpandrindra feno ny faritra ao Querétaro i Peña Colorada
Voadika ny 15 Novambra 2019 17:47 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Italiano, русский, Español
Peña Colorada. Sary nalain'i Federico Orozco, Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).
Vao tsy ela akory izay, ilay governoran'i Querétaro, fanjakana iray ao amin'ny faritra avaratra afovoan'i Meksika no namahana lahatsary iray ahitàna zaza roa, María sy Mateo, manao antso avo amin'ny fanjakàna sy ireo manampahefana federaly mba hametraka lalàna hananan'i Peña Colorada ny satam-piarovana.
.#Video 🌳🌳 Afaka hanampy ireo ankizy roa ireo hiaro ny faritra ekolojika Peña Colorada ao Querétaro ve ianao ?
ANP dia sata iray voafaritra araky ny lalàna ho faritra iray, ambony tany na anaty rano, izay tsy nisy fahasimbàna na fanovàna goavana ary misy lanja ara-ekolojika. Misy lalàna telo samy hafa miaro ny Peña Colorada amin'izao fotoana izao , ny roa eo amin'ny sehatra monisipaly ary ny iray eo anivon'ny faritra. Hisitraka ny fiarovana ambony indrindra eo amin'ny sehatra federaly ny Peña Colorada amin'ny famadihana azy ho ANP.
Ny lalàna Meksikàna dia nametraka sokajy valo amin'ny ANP. Ny antotan-taratasy CONANP natao tamin'ny 2014, nalaina tao amin'ny lahatsoratra nosoratan'i Juan José Arreola ho an'ny Shorthand Social, dia nanambara ny tokony hanaovana an'i Peña Colorada ho “Faritra iarovana ireo Loharanonkarena Voajanahary”, izay ny asan'olombelona mifandray amin'ny fiarovana azy ihany no omena alàlana hatao .
@PanchoDominguez no nilaza taminay fa ny dingana fanambaràna an'i #PeñaColorada ho [Faritra Voajanahary Arovana ] dia efa nanomboka 4 taona lasa izay [nataon'ny Kaomisiona Nasionaly Mpiaro Ny Faritra Voajanahary ], izay tsy nahatontosa izany hatramin'izao. Ndeha isika hanampy hitady làlana hafa eo amin'ny sehatra eto an-toerana mandra-pahita izay vahaolana federaly. #Queretaro
Amin'ny fampiasana ny tenifototra ao amin'ny Twitter #ConservemosPeñaColorada (#Let'sConservePeñaColorada, na hoe Ndao harovanaPeñaColorada), manamafy ireo mponina amin'ny hoe “Satria vitanao anio izany” tamin'ny alalan'ireo tambajotrany :
Ny Tetikasa Citizens Reforesting Querétaro, fikambanana iray ifotony naorina tamin'ny Mey 2019 izay manohana ny fiarovana ny “fehikibo maitso” efa misy sy ny fambolena hazo zanatany ao amin'ilay faritra, dia namoaka lahatsary iray tao amin'ny Twitter nandrisika ny governemanta hanambara haingana araka izay tratrany hoe tahiry federaly voajanahary arovana i Peña Colorada :